Dawladda ayaa sheegtay in ay ku hawlan tahay samaynta cusbitaal heer caalami ah oo neerfayaasha maskaxda ah - Iftiin FM
Iftiin FM Home
Dawladda ayaa sheegtay in ay ku hawlan tahay samaynta cusbitaal heer caalami ah oo neerfayaasha maskaxda ah
by Iftiin FM Reporter May 14, 2022
Dawladda ayaa sheegtay in ay ku hawlan tahay samaynta cusbitaal heer caalami ah oo neerfayaasha maskaxda ah taas oo qayb ka ah dadaallada socda ee wax looga qabanayo caqabadaha caafimaadka dhimirka ee dalka.
Arrintan ayaa shaaca laga qaaday shalay mar ay wadahadal yesheen Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo Kamel Ghribi oo ah guddoomiyaha Isbitaalada GKSD- oo ka mid ah isbitaallada gaarka loo leeyahay ee ugu sarreeya dalka Talyaaniga.
Golaha Barasabyada oo ku dhawaaqay go'aan lagu horumarinaya tayada adeegyada caafimaadka
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in caafimaadka dhimirka uu yahay caqabad ku soo korortay Kenya iyo gobolka, taasoo abuuraysa baahi degdeg ah oo loo qabo isbitaal takhasus leh oo wax ka qabta xaaladaha sii kordhaya.
Xildhibaankii hore ee deegaan barlamaanka Garsen Danson Mungatan oo xabsiga la dhigay
Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in dhismaha cusbitaalka oo qaadi doono 600 oo sariir uu bilaaban doono badhtamaha bisha soo socota iyada oo laga dhisayo dhul dhan 80 hektar oo ku yaala deegaanka Karen/Ngong.
Ghribi ayaa dhankiisa xaqiijiyay in hay’adiisa ay si buuxda uga go’an tahay in ay taageerto Kenya si ay u gaadho hadafkeeda ah in ay bixiso adeegyo caafimaad oo dhimir oo tayo leh oo qqiimo jaban kuwaasi oo ay ka faideysan donaan muwaadiniinteeda iyo bukaanada kale ee gobolka.
Barasabka Nyamira oo manta geeriyooday .
Ka sokow daawaynta la siinayo bukaannada caafimaadka dhimirka, cisbitaalka, wuxuu sidoo kale martigelin doonaa jaamacad takhasus leh si ay u tababarto shaqaalaha caafimaadka dhimirka.
Waddada weyn ee Nairobi Expressway ayaa hada uu furan isticmaalka dadweynaha.
Maxkamada oo si ku meel gaar ah uga mamnuucday xisbiga the Democratic Party in uu heshiis la saxiixdo Kenya Kwanza.
Booliska oo gacanta ku soo dhigay gaari laga xaday dowladda
Iftiin FM Reporter May 25, 2022
Dowladda oo howlgal hub ka dhigis ah ka sameyn doonto galbeedka Marakwet
Raila Odinga oo la kulmay dadka Curyaaminta ee dalka
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay Madaxweyne ku xigeennada dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug
Iftiin FM Reporter May 24, 2022
Madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya oo xil u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Dowladda Suuriya Oo Ruushka Ku Gacansiinaysa Dagaalka Ukraine
Iftiin FM Reporter May 23, 2022
Shaxda Ugu Fiican Xilli Ciyaareedka Premier League Oo daboolka laga qaaday
Iftiin FM Reporter May 24, 2022 May 24, 2022
Xisbiga Wiper oo ka hadlay isbaheysiga Azimio la Umoja
Guddiga ku baaqay in doorashada laga mamnuuco xildhibaan Rigathi Gachagua
Guddiga IEBC-da oo baaq uu diray Musharaxiinta xilka Madaxweyne
Kenya oo laga helay Kiisas cusub oo Cudurka Corona
Iftiin FM Reporter May 21, 2022
Justin Muturi oo sheegay in uu u tartamaya Kursiga Madxaweynaha
Iftiin FM Reporter March 21, 2022
Madaxii Qaraxyada Al-Shabaab ee Magaalada Marka oo gacanta lagu soo dhigay
Iftiin FM Reporter May 22, 2022